Izinwele kuzo zonke izizukulwana zazibhekwa elithile indlela abantu bazinakekele. Phela, uma sibona owesifazane ezingcolile futhi embondelene izinwele noma ikamu indoda, thina ngokushesha engasenandaba ukukhuluma nabo. Kunjengomuntu izicathulo. Ukubheka indoda izicathulo, ungakwazi ukuthola ukuthi ungubani nokuthi uluhlobo luni. Lapha nazo zinendima ethile kwetinhlavu umbono wokuqala indoda. Ngakho-ke kubalulekile ukuba izinwele zakho babenombono ephelele. Futhi ukudala nomphumela ofanayo ukusisiza anakekele izinto ezifana izinwele dryers, izinto zokulungisa izinwele emakhanda ezahlukene, ngamaketanga futhi stylers izinwele.
Insindiso amantombazane abanale ezisontekile, saba sezingeni yasungulwa njengoba rectifiers. Phela, njengoba umthetho, labo babe ezisontekile, iphupho sonke isikhathi sokusebenza ngokuphelele bushelelezi, futhi ubani has a flat - ngazo zonke izindlela bona umoya.
Kulesi sihloko, sizokhuluma ukuthola ukuthi yini izinwele straightener kangcono.
Ngokuthakazelisayo, rectifier akusho kuphela smoothes izinwele, kodwa futhi ngoba kungenzeka ukwenza ivolumu ephakamisa kubo empandeni, ngisho ukudala curls.
Iyiphi indlela engcono kakhulu izinwele straightener, zingaxazululwa nguwe kuphela, ngoba uhlobo ngalunye ezahlukene, umuntu eyomile, futhi kubani, futhi okunamafutha. Yebo, futhi ngempela inkinga evamile kubo bonke abesifazane - izinwele ababuthakathaka.
Ukuvikela kwabo, kungcono ukuba ukhethe rectifiers professional, banayo ezihlukahlukene nemisebenzi ukuze ezilawula le nqubo. Eshibhile bamane ungapheli. Inzuzo yabo futhi ukuthi kukhona ukushisa kuhle ashesha, kepha hhayi ngakho kwi ezishibhile.
Sanquma ukuba ukhethe eshibhile, kodwa angazi ukuthi kanjani? Kuhle izinwele straightener eyodwa lapho kukhona Regulator lokushisa. Lokhu kuzokuvumela ukuba njalo ukuqapha lokushisa, umthelela izinwele zakho, kanjalo wasindisa nezinwele ezinde ezomile. Khumbula ukuthi isikhathi ngasinye ngokubeka ayina, ulahlekelwa okuningi umswakama, kuqukethwe izinwele zakho. Kule ndaba, abalungisa izinwele kanye stylists belulekwa ukusebenzisa kubekwa hot hhayi ningi than kabili ngesonto, kutuswa ukusebenzisa njalo sindisa izifutho futhi balms.
Ukuze ukhethe straightener izinwele kangcono futhi kudingeka acabangele iyiphi enamathela kusukela amapuleti. Phela, ezinye zazo waphakamisela ukubophela, futhi abanye kunalokho luphulukisa.
Ebusweni kungenzeka ngobumba, metal, tourmaline, Teflon.
I enamathela Ceramic amnene, ke sinqamula kalula ngokusebenzisa izinwele, abenze ethambile futhi moisturizes.
Tourmaline enamathela - enamathela ehlanganisa phezu izinhlayiya ezithile, okuyinto ukuvikela izinwele zakho hhayi kuphela, kodwa futhi kwenza akhanye, futhi ususe zikagesi.
Ukukhetha straightener izinwele kangcono, kudingeka ucabangele kangaki ozoyisebenzisa. Uma une ngokwanele, futhi izikhathi 2 ngenyanga ke ungathola by nge enamathela metallic. Ububi lokhu enamathela wukuthi izinga lokushisa Ukuboshelwa basakaza yonkana ipuleti futhi ushisa izinwele, ziba posechennye ezomile futhi ezingaphili. Ngakho-ke kungcono hhayi ukusindisa, futhi ukhethe rectifier eziqinile.
Teflon kuyafana le Ceramic, kodwa inzuzo ukuthi amapuleti alo musa buthelela isitayela.
Kanjalo ezinengilazi engcono ehlanganisa ion kubhekwe kuze kube manje. It hhayi kuphela ivikela, kodwa futhi ibuyisela izinwele. Ukusabalala njalo is styler professional ezibizayo.
Iyiphi indlela engcono kakhulu izinwele straightener, futhi kuncike ubude kanye ukushuba izinwele zakho. Ngakho-ke ukukhetha rectifier kufanele inake ububanzi ukuma ipuleti. Esabalele blade bacabangisise ukoma ngaphezulu, futhi ayibanzi, ungathola eduze impande. ukuma kahle oyindilinga kukusiza ukwenza curls ahlukahlukene.
Ukuba khona amathiphu kubonisa rectifier ukusebenza. Uma ukhetha rectifier jikelele, kubalulekile ukuba acabangele leli.
Kukhona izinkampani eziningi rectifiers abakhiqizi. Ingabe ehola Braun, Remington, GA.MA, Rowenta, Philips.
Manje uyazi ukuthi ukukhetha straightener kangcono izinwele zakho. Ngakho-ke, thina ugijimele ezitolo bese ukhetha idivaysi evumelana nawe.
Umuthi 'Lamikon ": imfundo, ukubuyekezwa kwesicelo, analogue, Ukwakheka